U-WHO ubhengeza isibheno esingxamisekileyo se-US $ 7.7 yezigidigidi ekubambeni ukwanda okwahlukileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » U-WHO ubhengeza isibheno esingxamisekileyo se-US $ 7.7 yezigidigidi ekubambeni ukwanda okwahlukileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-COVID eyahlukileyo kwizibhedlele ezingaphaya
Ngamatyala amaninzi e-COVID-19 axelwe kwiinyanga ezi-5 zokuqala ngowama-2021 kunakuwo wonke owama-2020, ilizwe lisekwisigaba esibuhlungu salo bhubhane- ngaphandle kwamazinga aphezulu okugonya kwamanye amazwe ekhusela abantu kwizifo ezibi kunye nokufa.
Isibheno se-US $ 7.7 yezigidigidi asiyomfuno eyongezelelweyo yenkxaso-mali kodwa yinxalenye yohlahlo-lwabiwo mali lwe-ACT-Accelerator iyonke ye-2021, edingeka ngokungxamisekileyo kwiinyanga ezi-4 ezizayo ukulwa ukwahluka kwe-COVID.
Uvavanyo olungonelanga kunye neqondo lokugonya eliphantsi lenza ukwanda kokuhanjiswa kwezifo kunye neenkqubo zempilo zalapha ezingaphaya.
Imeko yangoku ishiya umhlaba wonke usesichengeni somahluko omtsha.
Amazwe amaninzi afumana amaza amatsha osulelo- kwaye ngelixa amazwe amaninzi anengeniso ephezulu kunye namanye amazwe anengeniso ephezulu esebenzise ugonyo olubanzi, abeka iinkqubo zovavanyo ezomeleleyo endaweni, kwaye enza ukuba unyango lonyuke ngokufumanekayo- uninzi luphantsi kwaye luphakathi. -amazwe angenayo ayasokola ukufikelela kwezi zixhobo zibalulekileyo ngenxa yokunqongophala kwemali kunye nokubonelelwa. Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ubhengeze ukuba ukutyala imali kwi-ACT-Accelerator ukwenza ukuba izixhobo zifumaneke kuye wonke umntu, naphina, ziya kunceda onke amazwe ngempendulo ebandakanyayo nelungelelanisiweyo.
Ukufikelela kwi-COVID-19 Izixhobo Accelerator (UMTHETHO-Accelerator) ngumanyano lwehlabathi lwemibutho ephuhlisa kunye nokuhambisa isifo, unyango kunye namayeza okugonya afunekayo ukuphelisa inqanaba lesifo. Olu bambiswano lwasekwa ekuqaleni kwalo bhubhane ekuphenduleni ikhwelo elivela kwiinkokheli ze-G20 kwaye lasungulwa ngo-Epreli 2020 kumsitho owawubanjwe ngokubambisana nguMlawuli-Jikelele we-World Health Organisation, uMongameli wase-France, uMongameli we IKhomishini yaseYurophu, kunye neBill & Melinda Gates Foundation. Inkxaso-mali ebalulekileyo yomzamo ivela ekuxhaseni okungathethekiyo kwabaxhasi, kubandakanya amazwe, icandelo labucala, ububele kunye namaqabane aphesheya.
Ngelixa i-4 ezahlukeneyo zenkxalabo Okwangoku kulawula i-epidemiology, kukho uloyiko lokuba izinto ezintsha ezinokubangela inkathazo zivele.
Ngokuzuza nzima kwiinyanga ezi-3 zokugqibela ezisengozini, i-ACT-Accelerator inyuse i-US $7.7 bhiliyoni isibheno, Ukuphendula ngokukhawuleza kwe-ACT-Accelerator Delta Response (RADAR), ngokungxamisekileyo:
Khulisa uvavanyo: I-US $ 2.4 yezigidigidi ukubeka onke amazwe anengeniso ephantsi kunye nesezantsi-kumkhondo kwindlela yokonyuka amatyeli alishumi kuvavanyo lwe-COVID-19 kwaye iqinisekise ukuba onke amazwe anyukela kumanqanaba ovavanyo olwanelisayo. Oku kuya kukhulisa ukuqonda kwasekuhlaleni nakwilizwe jikelele ngokutshintsha kwesifo esivelisayo kunye nezinto ezivelayo ezixhalabisayo, ukwazisa ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwempilo yoluntu kunye namanyathelo entlalontle kunye nokwaphula imixokelelwane yosulelo.
Gcina iinzame zeR & D zokuhlala ngaphambi kwintsholongwane: I-US $ 1 yezigidigidi ye-R & D eqhubekayo, yenza ukuba kuqulunqwe ngakumbi ukuthengiswa kunye nokuveliswa, uncedo lobuchwephesha kunye nokuveliswa kwemfuno yokuqinisekisa ukuba iimvavanyo, unyango kunye nezitofu zihlala zisebenza ngokuchasene nokwahluka kwe-Delta kunye nezinye izinto ezivelayo, kwaye ziyafikeleleka kwaye ziyafikeleleka apho zifuneka khona.
Idilesi yeoksijini engxamisekileyo kufuneka isindise ubomi: I-US $ 1.2 yezigidigidi ukujongana ngokukhawuleza neoksijini ebukhali kufuneka inyange abagulayo kwaye ilawule ukubonwa kokufa okubangelwe kukwahluka kweDelta.
Ukukhutshwa kwezixhobo: I-US $ 1.4 yezigidigidi ukunceda amazwe ukuba achonge kwaye ajongane neengxaki eziphambili ekusetyenzisweni nasekusebenziseni zonke izixhobo ze-COVID-19. Njengokubonelelwa kwezitofu zokugonya ze-COVID-19 kwiinyanga ezizayo, inkxaso-mali eguqukayo iya kubaluleka ekuncedeni ukuzalisa izithuba zokuhanjiswa komhlaba.
Khusela abasebenzi bezempilo abaphambili: I-US $ 1.7 yezigidigidi ukubonelela ngononophelo lwempilo oluyimfuneko kwizigidi ezibini ezaneleyo zokuzigcina zikhuselekile ngelixa zikhathalela abagulayo, kuthintela ukuwa kweenkqubo zezempilo apho abasebenzi bezempilo sele benabasebenzi abambalwa kwaye benwenwe ngaphezulu, kwaye kuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19.
Ukongeza kwisibheno sase-US $ 7.7 sezigidigidi, kukho ithuba lokugcina unikezelo lwezitofu ngokusebenzisa ukhetho kwikota yesine ka-2021 ngeedosi ezizizigidi ezingama-760 zokugonya eziza kufumaneka phakathi ku-2022 ngaphaya kweedosi ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo yi-COVAX ukuya kuthi ga esiphelweni se-Q1 2022. Ukuzibophelela ukugcina olu khetho lokugonya kwikota yokugqibela yonyaka yokuhanjiswa phakathi ku-2022 kungenziwa eGavi / COVAX, njengenxalenye yomthetho we-ACT-A yenethiwekhi yeearhente.
Unikezelo olugciniweyo lweedosi zokugonya ezingama-760 ezizigidi ngokusebenzisa ukhetho kwikota yokugqibela kulo nyaka ukuqinisekisa ukuba kuyaqhubeka ukubonelelwa ukwenza ukuhanjiswa kwi-2022 kufuna i-capital continge. Ukuhanjiswa kwezi dosi zizigidi ezingama-760 kuyakuxabisa i-US $ 3.8 yezigidigidi.
Ugqirha Tedros Adhanom Ghebreyesus, uMlawuli-Jikelele we-WHO, uthe: “I-US $ 7.7 yezigidigidi iyafuneka ngokungxamisekileyo ukuxhasa umsebenzi we-ACT-Accelerator wokukhawulelana nokuqhambuka kwe-Delta kunye nokubeka umhlaba kumkhondo wokuphelisa ubhubhane. Olu tyalomali yinxalenye encinci yemali echithwa ngoorhulumente ukujongana ne-COVID-19 kwaye yenza isimilo, uqoqosho kunye nesifo se-epidemiological. "
UCarl Bildt, uMthunywa oKhethekileyo we-WHO kwi-ACT-Accelerator, uphawule wathi: “Ukuphelisa lo bhubhane kuza kuvelisa izigidi ngezigidi zeedola kwimbuyekezo yezoqoqosho ngenxa yokonyuka kwemveliso yezoqoqosho kwihlabathi jikelele kunye nokuncipha kwesidingo sezicwangciso zikarhulumente zokujongana nengxaki yezempilo neyezemali eye-COVID- Izizathu ezili-19. Ifestile yesenzo ngoku. ”
I-ACT-Accelerator kutshanje ipapashe Q2 2021 Ingxelo yoHlaziyo, Esibonelela ngesishwankathelo senkqubela phambili eyenziweyo ekusindiseni izixhobo ze-COVID-19 ezisindisa ubomi kumazwe kwihlabathi liphela, kwaye ibalaselisa iinzame ezenziwe ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zezempilo ziyakwazi ukufumana nokwandisa ngokupheleleyo ukusetyenziswa kweendlela zokulwa ze-COVID-19, ngexesha Epreli-ukuya kuJuni 2021. Ibonisa indlela utyalomali olwenziwe ngayo kwi-ACT-Accelerator eziqhube iziphumo kunye nefuthe ekulweni ne-COVID-19.
Intetho eyandisiweyo yehlabathi kunye namanyathelo amatsha abonisa ukubaluleka kokuphumeza ubulungisa kumlo wokulwa nobhubhane. Kwisithuba nje esingaphezulu kweenyanga ezili-15, ngo-Agasti 9, 2021, abaxhasi babenyukile kwaye banikezela nge-US $ 17.8 yezigidigidi ze-ACT-Accelerator ye-US $ 38.1 yezigidigidi zemfuno zezezimali. Isisa esingazange sabonwa ngaphambili siqhube eyona nzame ikhawulezayo kunye nelungelelanisiweyo kwimbali yokuphuhlisa izixhobo zokukhusela ukhuseleko lwempilo kwihlabathi liphela, kunye nokuzisa ifuthe apho lifuneka kakhulu.
Impumelelo kwiintsika ze-ACT-Accelerator zibandakanya:
Insika yokuchonga, edityaniswe yi-FIND kunye neNgxowa-mali yeHlabathi, isebenza ngokusondeleyo ne-UNITAID, i-UNICEF, i-WHO kunye namaqabane angaphezulu kwama-30 ezempilo kwihlabathi jikelele ukukhulisa ukufikelela ngokulinganayo kubuchwephesha bokuqonda isifo be-COVID-19:
Ngaphezulu kwesigidi se-84 seemolekyuli kunye novavanyo lwe-antigen olukhawulezayo lokuqonda isifo (i-RDTs) lufunyenwe ngeDiagnostics Consortium
Ukuveliswa kwemimandla kunikwe amandla ngokudluliselwa kwetekhnoloji
Ngaphezulu kwamazwe angama-70 axhaswe ukwandisa iziseko zophando kunye nokuqinisa uvavanyo.
Iintsika zonyango, edityaniswe yiWellcome, Unitaid, exhaswa yiWHO, iUNICEF kunye neNgxowa-mali yeHlabathi:
Kukhutshwe unyango lwe-US $ 37 yezigidi ezibandakanya unyango olubandakanya i-3 yezigidi zeedosi ze-dexamethasone, kunye ne-US $ 316 yezigidi zexabiso lokubonelelwa ngeoksijini.
Ukuchongwa okuxhaswayo kwonyango lokuqala olusindisa ubomi lwe-COVID-19-dexamethasone-kwaye yanikezela ngesikhokelo sehlabathi ekusebenziseni kwayo.
I-COVID-19 Oxygen Emergency Taskforce yenziwa ukuba ivavanye kwaye ijongane ne-COVID-19 surges kwimfuno yokunciphisa ukufa okunokuthintelwa. Intsika ikwaphule isivumelwano sabathengisi beoksijini kwezonyango abaphezulu- i-Air Liquide kunye ne-Linde -ukusebenzisana namaqabane e-ACT-Accelerator ekwandiseni ukufikelela kwioksijini kumazwe anengeniso ephantsi kunye naphakathi. Imfuno yelizwe jikelele yeoksijini yezonyango okwangoku ingaphezulu kweshumi elinesihlandlo esikhulu kunangaphambi kobhubhane.
Ukusukela ekuqaleni kobhubhane ukuya ku-Julayi 1, 2021, ngaphezulu kwe-US $ 97 yezigidi ze-oksijini (izinto ezizizigidi eziyi-2.7) sele zithunyelwe kumazwe.
Ukongeza, kwikota ephelileyo, i-US $ 219 yezigidi inikezelwe kumazwe ukuthengwa kwezibonelelo zeoksijini, kubandakanya ioksijini ezigxininisa kunye nezityalo ezintsha zikawonke-wonke, ngokusebenzisa iGlobal Fund COVID-19 Response Mechanism.
I-COVAX, intsika yeVaccinesIndibaniselwano yi-Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (i-CEPI), i-Gavi, i-Vaccine Alliance kunye ne-World Health Organisation (i-WHO) - esebenza ngokubambisana ne-UNICEF njengeqabane eliphambili lokumilisela, kunye nabavelisi bezitofu zokugonya, imibutho yoluntu kunye iBhanki yeHlabathi ine:
Kukhawuleziswe uphando kunye nokuphuhliswa kwepotifoliyo yabagqatswa abali-11 kumaqonga amane obuchwephesha.
Kuthunyelwe i-186.2 yezigidi zokugonya kumazwe ayi-138 nakuqoqosho (ukusukela nge-5 Agasti 2021). Kwezi, iidosi ezili-137.5 yezigidi zathunyelwa kumazwe angama-84 e-AMC nakwezoqoqosho. Kulindeleke ukuba inani elipheleleyo leedosi eziyi-1.9 ziya kufumaneka ukuthunyelwa ukuphela kuka-2021. Kwezi, abathathi-nxaxheba be-AMC kulindeleke ukuba bafumane iidosi ezimalunga ne-1.5 yezigidigidi, kubandakanya idosi enikelweyo, elingana ne-23% yabemi (ngaphandle kweIndiya) .
Ukuseka iQela eliSebenzayo leMveliso ukuze lichonge kwaye lisombulule imiba yokuvelisa ethintela ukufikelela ngokulinganayo kwizitofu kusetyenziswa i-COVAX. Abasebenzi bakhawulezisa ukujongana nemiceli mngeni yexesha elifutshane kunye neengxaki kwaye basebenzisana nequmrhu eMzantsi Afrika ukuhambisa itekhnoloji kunye nokuseka indawo yokuvelisa isitofu kwingingqi, iqinisekisa ukhuseleko lwempilo lwexesha elide.
Isinxibelelanisi seNkqubo yezeMpilo, edityaniswe yiNgxowa-mali yeHlabathi, iWHO kunye neBhanki yeHlabathi:
Ekupheleni kuka-Epreli, kuthengwe iPPE exabisa ngaphezulu kwe-US $ 500 yezigidi, kuvavanywa ukulungela ilizwe ukuthunyelwa kwezitofu ze-COVID-19 kumazwe angaphezu kwe-140 (ngokudibeneyo yiBhanki yeHlabathi, i-GFF, iGavi, iNgxowa-mali yeHlabathi, i-UNICEF kunye ne-WHO), kwaye babhala ukuphazamiseka ukuya kwi-90% yeenkqubo zezempilo kunye neenkonzo ngophando lwesizwe lokutsala ngaphezulu kwamazwe ayi-100.
Ukuqonda okuthe ngqo kwilizwe elithile kwiibhotile kunye nemiceli mngeni enxulumene neenkqubo zezempilo kwaye iphuhlise izikhokelo zehlabathi kunye noqeqesho kwimimandla emininzi yenkqubo yezempilo.
Uncitshisiwe ukunciphisa amaxabiso ePPE, ukufikelela kwiipesenti ezingama-90 zokuncitshiswa kweemaski zonyango kunye nokuphefumla kwe-N95 / FFP2. Zombini iNgxowa-mali yeHlabathi, ngokusebenzisa i-COVID-19 Response Mechanism (C19RM), kunye neZibonelelo zezeMali zeHlabathi, nge-COVID-19 yeeNkonzo zeMpilo eziBalulekileyo, banike izibonelelo kumazwe ukuba athenge iPPE, asasaze amachiza kwaye aqeqeshe abasebenzi bezempilo ekukhutshweni kweyeza lokugonya yomeleza impendulo yesizwe ye-COVID-19.
I-PPE stock ebekwe ngaphambili yi-UNICEF kuyo yonke indawo yokugcina izinto eCopenhagen, eDubai, ePanama naseShanghai iyafumaneka kwangoko ukuhanjiswa kumazwe asweleyo, kuxhomekeke kubukho benkxaso-mali.